Mubairo Dhiragoni: Kurudzira Wako Ongororo uye Izwi reMuromo Kushambadzira | Martech Zone
Mubairo Dhiragoni: Kurudzira Wako Ongororo uye Izwi reMuromo Kushambadzira
Muvhuro, July 28, 2014 Chitatu, Kukadzi 18, 2015 Douglas Karr
Mazhinji emabhizimusi madiki anotenda inopfuura hafu bhizinesi ravo rinouya kubva mukutumira, zvakadaro makumi masere muzana vanobvuma kuti havana hurongwa hwekugara vachigadzira kuendesa. Kana iwe uri mumwe we makumi masere muzana, hausi kushandisa nzira yekutengesa iyo ine imwe yemhando yepamusoro yekutendeuka kwechero zano. Mubayiro Dhiragoni ndeyekutumira kushambadzira chikuva chemabhizinesi emuno. Ndiwo mashandisiro emabhizimusi madiki awo kureva-shamwari-zvirongwa kuwedzera kutengesa.
Mubayiro Dhiragoni zvakasarudzika inosanganisa humbowo hwevatengi, kugovana munharaunda, uye mubairo wekutumira kutyaira yakawanda mari kumusuwo wavo Maitiro ari nyore:
Kukoka - Mabhizimusi anoshandisa Reward Dragon kutumira kukoka kune avo vatengi uchivakumbira kuti vanyore chipupuriro chipfupi
kuratidza - Kana ichinge yabvumidzwa nebhizinesi, vatengi vanobvumirwa vanozviratidza pawebhusaiti yavo kuburikidza neReward Dragon widget, uye paTestimonial Gallery peji paReward Dragon.
mugove. Vatengi vanogona kugovera bhizinesi pane vezvenhau vachishandisa yavo pachavo yekuendesa kodhi. Shamwari dzinogona kukumbira koponi yekuchengetedza.
Reward. Kana shamwari dzichiita kutenga kwadzo kwekutanga, iye munhu akaendesa iko kunowana mapoinzi.
Zvakabatanidzwa matatu matatu skrini kubva Reward Dragon nhengo, Puptown Indy. Ivo vanopa kunatsiridza imbwa, kukwira, uye kudzidzisa mabasa Puptown inopa vatengi vatsva madhora makumi maviri nemashanu kubva pakuchenesa kana kutarisira masikati / kugara kwehusiku. Kune imwe neimwe inonunurwa, mutengi anozowana madhora mashanu kubva pakutenga kwavo kunotevera uye Puptown inopa madhora mashanu kuHamilton County Humane Society.
Bhizinesi rega rega rine Rayo Ongororo Peji!
Ongororo dzinogona kugoverwa paSocial Channel
Iyo Reward Dragon Widget inoratidza wazvino wongororo!
Puptown inoshuma kuti coupon redhiyo chiyero chevatengi vatsva yakakwira kupfuura mamwe mafomu ekushambadzira avakashandisa, uye kuti avo vatengi vari kudzokorora kutenga.
Tags: tarisa-shamwariinjini yekuendesakutumira kushambadzirakuendesa kushambadzira chikuvazvokusumwamubayiro dhiragonimibayirokuongorora kwevanhuizwi remuromo
Yako 2014 Dhijitari Kushambadzira Roadmap